Endrey, tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina – FJKM Ambavahadimitafo Endrey, tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina |
Endrey, tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina
Publié le 07 juin 2020 à 08:06
Alahady 07 Jona 2020, hibanjinana indray ny lohahevitra hoe « Mihavana ao amin’ny Tompo« . Miarahaba ny reny rehetra koa nahatratra ny Fetin’ny reny 2020, ny fiadanan’ny Tompo ho aminareo.
Ny Salamo 133 na salamo fiakarana, hira vavaka fanaon’ny zanak’Israely rehefa hiakatra ao Jerosalema, no nangalan’ny mpitandrina Rakotoarisoa Alain ny hafatr’Andriamanitra anio :
Endrey, tsara sady mahafinaritra Raha ny mpirahalahy no miara-monina. Tahaka ny diloilo tsara amin’ny loha, Izay mitsororoka amin’ny somotra, dia ny somotr’i Arona, Izay mitsororoka amin’ny moron-tongotr’akanjony. Tahaka ny ando any Hermona, izay milatsaka amin’ny tendrombohitra Ziona; Fa voadidin’i Jehovah ho eo ny fitahiana, Dia fiainana ho mandrakizay
Manasa anao hiara-hiombona @ izao fanompoam-pivavahana izao